अलास्कामा अमेरिकी सदनका लागि रुसी आप्रवासीको प्रतिस्पर्धा | Rajmarga
जुनु (अलास्का) । सैँतीस वर्षका दिमित्री सिनले पहिलेदेखि नै अमेरिकी सपना बुनिसकेका छन् । सोभियत सङ्घमा जन्मिएका सिनसँग उनको हजुरबुबासँग भोक टार्न सडकमा भिख माग्नुपरेको सम्झना ताजै छ । सन् १९९० को दशकको सुरुमा उनी र उनकी आमा अलास्का आएका थिए । सिनकी आमाले अङ्कोरेजमा एक व्यक्तिसँग विवाह गरेकी थिइन् । विवाहपछि उनीहरू एक आश्रयस्थलमा बस्दा सार्वजनिक सहयोगका लागि तड्पिन्थे ।
‘म एक फरक मुलुकमा ब्युझिएँ, मैले भनेँ, हे भगवान ! हामी कहाँ बस्दैछौँ, यो त्यो मुलुक होइन जहाँ म आउँदा मलाई स्वागत गरिएको सम्झना छ’– सिनले भने ।
पूर्व लेखापाल सिनले उनका हजुरबुबाले रुसबाट पठाइदिएको कबाब ग्रिल बनाउने भाँडोबाट प्रेरित भई फूल रोप्ने बक्स (प्लान्टर बक्स) आविष्कार गरे । उनी अलास्कामा दर्ता भएका ९४ वटा टेस्लामध्ये एउटा चलाउँछन् । ‘ब्याक टु द फ्यूचर’ सिनेमामा डिलोरियनले गरेजस्तै यसका ढोकाहरू माथिपट्टि खुल्छन् ।
सिन र उनले ती किशोरीहरूसँगै जीवन बिताउनेबारेमा छलफल गरे । उनीहरूको छोराले निर्णयलाई सजिलो बनाइदिए । ‘के उनीहरूलाई घर चाहिन्छ ? किन उनीहरू हामीसँगै बस्न सक्दैनन् ?’– छोराले भने । ती किशोरीहरू उनीहरूसँग आए र सिनको परिवारले सन् २०१६ मा तिनीहरूलाई ग्रहण गरे ।
उनले त्यो अनुभव र गरुङ्गो भारीबीच समानान्तर रेखा खिच्दै मुलुकको सुधार गर्न काङ्ग्रेसलाई ती आवश्यक हुने बताए । ‘यो कडा मेहेनत गर्ने बारेमा उदाहरण हो’– उनले भने । –बेकी बोहरर र मार्क थिसिन /रासस/एपी/अनुवादः दिलीप अधिकारी
Previous post: ट्रम्पको नयाँ नीतिले चीन–अमेरिका व्यापारमा देखियो यस्तो असर
Next post: प्रहरी चौकी पुगिन् श्रीमती, श्रीमानको विषयमा बताइन् यस्तो कुरा, प्रहरी भए चकित